एमालेको अहम : माओवादीले ५०–५० भनेसम्म पार्टी एकता हुँदैन - Everest Dainik - News from Nepal
‘दुवैमा अापसी डर हट्नेबित्तिकै एकता हुन्छ’- रघुजी पन्त
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकता समायोजन हुँदा बन्ने बिभिन्न समितिमा कति-कति सदस्य रहने भन्नेमा पुगेर अड्किएको छ ।
स्थायी समिति, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय समिति, राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, निर्वाचन क्षेत्र, महानगर/नगर वा गाउँ कमिटी, वडा कमिटी, प्रारम्भिक कमिटी बनाउने तयारी छ ।
पार्टी एकता भावनाले हुने होईन । संख्या महत्वपुर्ण बिषय हो । देश संस्थाले चल्छ भने पार्टी एकतामा संख्या महत्वपुर्ण हुँदैन त ?
यहि जिज्ञासा राख्दा एमालेका नेता तथा प्रतिवेदन मस्यौदा लेखन समितिका सदस्य रघुजी पन्तले भने ‘दुबै पार्टीले सुहाउने खालको प्रस्ताव राख्नुपर्यो । निहु खोज्ने खालको कुरा गरेर पार्टी एकता हुन सक्दैन । पार्टी एकता भावनाले हुने होईन । संख्या महत्वपुर्ण बिषय हो । देश संस्थाले चल्छ भने पार्टी एकतामा संख्या महत्वपुर्ण हुँदैन त ? हाम्रो संविधानले बहुमतको सरकार बन्ने भनेको छ, भनेको छ यो संख्या होईन ? भोलि पार्टीभित्र बिभिन्न निर्णय गर्नुपर्दा संख्याको महत्वपुर्ण भूमीका रहन्छ । त्यसकारण संख्या महत्वपुर्ण बिषय हो र यो टुङ्गिएपछि पार्टी एकताले मुर्त रुप लिन्छ ।’
भनेपछि भोलिको राजनीतिक भविष्य के हुने भन्ने नेतृत्वको अविश्वासले पार्टी एकतामा ब्रेक लागेको रहेछ होईन ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘हो भोलिको राजनीतिक भविष्य के होला भन्ने परेकोले ब्रेक लागेको हो भन्ने मलाई पनि लागेको छ ।
महाधिवेशन आफैँ स्वतन्त्र हुन्छ, त्यसबाट के परिणाम आउछ भन्न सकिन्न तर अहिल्लै नेतृत्व फलानो भनेर तोक्नुपर्ने रे ! यस्तो पनि हुन्छ, अहिले तोक्दा भोलि महाधिवेशनले अर्कै मोड लियो भने त्यो सहि भएन नी ।’
अब संख्या कसरी मिलाउने त ? भन्ने अर्को प्रश्नमा उनले भने “त्यसको जिम्मा एकता संयोजन समितिलाई दिएका छौँ । त्यसैले मिलाओस तर माओवादीले अहिले जसरी ५०–५० भनिरहेको छ, यसो भन्दा सम्म पार्टी एक्ता हुँदैन । माओवादी यसबाट लचिलो हुनैपर्छ । एमालेले पनि अनावश्यक भन्न हुँदैन । दुबै पार्टीले सम्मानजनक एकता भएको फिल गर्नु पर्यो । नत्र एकतामा बिलम्ब हुन्छ । तर पार्टी एक्ता हुनेमा म ढुक्क छु । हतारो गरेर आजै, भोलि नै घोषणा गरिहाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन् ।”
महाधिवेशन आफैँ स्वतन्त्र हुन्छ, त्यसबाट के परिणाम आउछ भन्न सकिन्न तर अहिल्लै नेतृत्व फलानो भनेर तोक्नुपर्ने रे ! यस्तो पनि हुन्छ, अहिले तोक्दा भोलि महाधिवेशनले अर्कै मोड लियो भने त्यो सहि भएन नी ।”
प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड एकीकृत पार्टीमा संख्या मिलाउने अन्तिम छलफलमा पनि छन् ।
चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकताको निर्णयसहित गत १७ असोजमा भएको ६ बुँदे सहमतिको शृंखलाले सात महिना पूरा गरे पनि संवाद शृंखलाबाट निष्कर्ष नआउँदा दुवै पार्टीका कार्यकर्तामा संशय बढेको छ । यद्यपि, संशयकै बीचमा एकता बढेकाले अप्रत्याशित एकताको अन्तिम निर्णय हुने दुवै पार्टीका नेताको दाबी छ ।
याे पनि पढ्नुस भाेलि सरकार विस्तार हुन्छ : प्रचण्ड
यस्ताे छ सहमतीकाे तयारी
संवाद शृंखलाबाट निष्कर्ष नआउँदा दुवै पार्टीका कार्यकर्तामा संशय बढेको छ । यद्यपि, संशयकै बीचमा एकता बढेकाले अप्रत्याशित एकताको अन्तिम निर्णय हुने दुवै पार्टीका नेताको दाबी छ ।
एमाले नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको वरीयताबारे विधानको मस्यौदामा केही उल्लेख छैन । एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले नै उनीहरूको वरीयताबारे निर्णय गर्ने सहमति नेताहरूबीच भएको छ ।
जनताको बहुदलीय जनवाद र २१औँ शताब्दी जनवादको सट्टा समाजवादउन्मुख नीति अंगीकार गरेर जाने विषयमा दुई दल लगभग सहमत भइसकेका छन् ।
ट्याग्स: Left Unity, raghu jee panta, raghunath bajagain